မနျဒီ ယာရှငျဆုမရတဲ့ အကွောငျးကို ထုတျဖျောတဲ့ အီဗရာ – Mobile GuidE
ယူနိုကျတကျအသငျးနှငျ့ ပွငျသဈအသငျးရဲ့ နောကျခံလူဟောငျးတဈဦးဖွဈသူ အီဗရာက ခယျြလျဆီးဂိုးသမား မနျဒီအား ယာရှငျဆုမပေးခွငျးမှာ အာဖရိကကစားသမားတဈဦးဖွဈနတောကွောငျ့ဆိုပွီး စှပျစှဲပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့ တနင်ျလာနကေ့ ခြီးမွှငျ့ခဲ့တဲ့ Ballon d’Or ဆုပေးပှဲရဲ့ အကောငျးဆုံးဂိုးသမားဆု(ယာရှငျဆု)ကို ပွငျသဈကလပျ PSG အသငျးရဲ့ အီတလီလကျရှေးစငျဂိုးသမား ဒှနျနာရမျမာက ဆှတျခူးရရှိသှားခဲ့ပါတယျ။
ဒှနျနာရမျမာဟာ ယူရို-၂၀၂၀ ပွိုငျပှဲတှငျ အီတလီအသငျး ဗိုလျစှဲစရေနျ လကျစှမျးပွခဲ့သူဖွဈပွီး ခယျြလျဆီးအသငျးကို
၂၀၂၀ ခနျြပီယံလိဂျခနျြပီယံဖွဈအောငျ လကျစှမျးပွခဲ့တဲ့ ဆီနီဂေါလကျရှေးစငျဂိုးသမား မနျဒီကို မဲအသာရကာ (ဒှနျနာရမျမာ က ၅၉၄ မဲ၊ မနျဒီက ၄၀၄ မဲ) အဲဒီဆုကို ဆှတျခူးခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
“အကောငျးဆုံး ဂိုးသမားဆု (Yashin Trophy) ရှေးတဲ့နရောမှာ အကျဒျဒှပျ မနျဒီ ကို ဘာကွောငျ့မရှေးခယျြခဲ့သလဲ..?
ဥရောပတိုကျက လူတှအေတှကျ အာဖရိက ဖလားဆိုတာ မြောကျပှဲလောကျသာ သဘောထားတာပါ..၊ ဒ့ါကွောငျ့အဲဒီဖလားကို ဘယျသူကမှ တနျဖိုးမထားကွပါဘူး”
“ဒါ့အပွငျ ကြှနျတျောတို့ဟာ အဲဒီဖလားပှဲကို ယှဉျပွိုငျခှငျ့ရဖို့ ကိုယျ့အသငျးကနေ ထှကျခှငျ့တောငျးရပါတယျ။
ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ အာဖရိကတိုကျအတှကျ နညျးနညျးလေးပဲ စဉျးစားထားတာကွောငျ့ ဖွဈပါတယျ။
ဒါတှဟော ပွောငျးလဲရပါမယျ၊ ပွောငျးလဲလာမယျလို့ မြှျောလငျ့ရပါတယျ။”ဆိုပွီး ပကျထရဈဈ အီဗရာက ပွောပါတယျ။
မန်ဒီ ယာရှင်ဆုမရတဲ့ အ​ကြောင်းကို ထုတ်​ဖော်တဲ့ အီဗရာ
ယူနိုက်တက်အသင်းနှင့် ပြင်သစ်အသင်းရဲ့ နောက်ခံလူဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်သူ အီဗရာက ချယ်လ်ဆီးဂိုးသမား မန်ဒီအား ယာရှင်ဆုမပေးခြင်းမှာ အာဖရိကကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်နေတာကြောင့်ဆိုပြီး စွပ်စွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္လာနေ့က ချီးမြှင့်ခဲ့တဲ့ Ballon d’Or ဆုပေးပွဲရဲ့ အကောင်းဆုံးဂိုးသမားဆု(ယာရှင်ဆု)ကို ပြင်သစ်ကလပ် PSG အသင်းရဲ့ အီတလီလက်ရွေးစင်ဂိုးသမား ဒွန်နာရမ်မာက ဆွတ်ခူးရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။
ဒွန်နာရမ်မာဟာ ယူရို-၂၀၂၀ ပြိုင်ပွဲတွင် အီတလီအသင်း ဗိုလ်စွဲစေရန် လက်စွမ်းပြခဲ့သူဖြစ်ပြီး ချယ်လ်ဆီးအသင်းကို ၂၀၂၀ ချန်ပီယံလိဂ်ချန်ပီယံဖြစ်အောင် လက်စွမ်းပြခဲ့တဲ့ ဆီနီဂေါလက်ရွေးစင်ဂိုးသမား မန်ဒီကို မဲအသာရကာ (ဒွန်နာရမ်မာ က ၅၉၄ မဲ၊ မန်ဒီက ၄၀၄ မဲ) အဲဒီဆုကို ဆွတ်ခူးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
“အကောင်းဆုံး ဂိုးသမားဆု (Yashin Trophy) ရွေးတဲ့နေရာမှာ အက်ဒ်ဒွပ် မန်ဒီ ကို ဘာကြောင့်မရွေးချယ်ခဲ့သလဲ..? ဥရောပတိုက်က လူတွေအတွက် အာဖရိက ဖလားဆိုတာ မျောက်ပွဲလောက်သာ သဘောထားတာပါ..၊ ဒ့ါကြောင့်အဲဒီဖလားကို ဘယ်သူကမှ တန်ဖိုးမထားကြပါဘူး”
“ဒါ့အပြင် ကျွန်တော်တို့ဟာ အဲဒီဖလားပွဲကို ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရဖို့ ကိုယ့်အသင်းကနေ ထွက်ခွင့်တောင်းရပါတယ်။ သုံးပတ်ခွင့်ယူပြီး ဖလားပွဲကစားရပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အာဖရိကတိုက်အတွက် နည်းနည်းလေးပဲ စဉ်းစားထားတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေဟာ ပြောင်းလဲရပါမယ်၊ ပြောင်းလဲလာမယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။”ဆိုပြီး ပက်ထရစ်စ် အီဗရာက ​ပြောပါတယ်။